Waa maxay dhulgariir: astaamaha, hirarka dhul gariirka iyo dhul gariirka | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa waxaad soo aragtay gariir yar oo dhulka ah ama waxaad dareentay gariir mana ogid sababta. Dhulgariirrada badanaa waa laga hadlaa, laakiin dad badan ma oga waa maxay dhulgariir runti, asalkiisa iyo sababihiisa. Si loo fahmo asalka sababaha dhul gariirka waa inaan aqoon xoog leh ka helnaa cilmiga dhulka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa uu yahay dhulgariirku, asalkiisa, sababihiisa iyo natiijooyinkiisa.
1 Waa maxay dhulgariir
2 Asalka dhulgariir
3 Mawjadaha dhul gariirka
4 Dhul gariirka iyo muhiimada
Dhul gariir waa dhacdo uu sababay gariirka qolofta dhulka, taas oo ay ugu wacan tahay kala-go'idda taarikada tectonic ee samaysa dusha sare ee dhulkeenna. Ha ahaato buurta illaa waxa loogu yeero cilladaha, waxaa laga heli karaa meel kasta oo ku taal saxanka geeskiisa, taas oo dhacda marka laba taariko kala baxaan. Kiiska ugu caansan waa kan Waqooyiga Ameerika, halkaas oo laga helo qaladka San Andreas. Meelahan waxay diiwaangeliyeen dhulgariirradii ugu waxyeella badnaa, xitaa waxay gaareen xoogagga 7,2 ee qiyaasta Richter.
In kasta oo miisaanka ugu caansan uu yahay miisaanka 'Richter scale', kaas oo kaliya cabbira cabirka ifafaalaha, khubaradu sidoo kale waxay adeegsadaan miisaanka 'Mercalli' si ay u cabiraan saameynta deegaanka, iyo sidoo kale cabirka dhul gariirka hadda jira si loo qiimeeyo adkaanta iyo masaafada. way barakicisay.
Qiyaasta Richter-ka waxaa lagu soo koobay:
Cufnaanta 3 ama ka yar: badiyaa lama dareemo, laakiin way iska diiwaangalin doontaa si kastaba ha noqotee. Badanaa ma keeno waxyeelo muuqata.
Xaddiga 3 ilaa 6: muuqda Khasaare yar ayaa laga yaabaa
Xaddiga 6 ilaa 7: Waxay magaalada u geysan karaan dhaawac culus.
Xaddiga 7 ilaa 8: dhaawaca ayaa ka sii muhiimsan. Waxay burburin kartaa dhul ka badan 150 kiiloomitir.
Dhulgariir ka badan 8 digrii wuxuu sababi karaa waxyeelo maadiga ah oo baaxad weyn oo u jirta dhowr kilomitir. Laakiin ma jiraan wax diiwaan ah oo sheegaya in heerkan laga gaadhay dalkeenna.
Dhulgariirrada waxaa sababa dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic. Tani waa sababta oo ah taarikadaani waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq joogto ah waxayna sii daayaan tamarta inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa. Waxaa sababi kara qaraxyada fulkaanaha maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin mowjad tamar dabiici ah. Waxa aan aragno waa hirar dhul gariir ah oo ka imanaya gudaha dhulka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo mowjadaha dhul gariirka ah, dhammaantoodna waxaa lagu metelaa barnaamijyada 'seismogram'.
Dhulgariir laftiisu waa gariir ka dhaca dhulka dushiisa, oo uu sababo tamar si lama filaan ah looga sii daayo dhulka gudihiisa. Siidaynta tamarta waxay ka timaaddaa dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic, oo sii deysa tamarta inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa. Waxay ku kala duwanaan karaan cabbirka iyo xoogga. Dhulgariirrada qaar ayaa ah kuwo daciif ah oo wada shaqeynta lama dareemo. Si kastaba ha noqotee, kuwa kale waxay noqon karaan kuwo rabshado wata oo awood u leh inay dumiyaan xitaa magaalooyinka.
Dhulgariirro isdaba joog ah oo ka dhaca gobol waxaa loo yaqaan 'seismic activity'. Waxay loola jeedaa soo noqnoqoshada, nooca, iyo cabirka dhulgariirrada meeshan ka dhacay in muddo ah. Dhulka dushiisa, dhulgariirradan waxay u muuqdaan kuwo ruxaya dhulka iyo barakac muddo gaaban socday.
Waxay badanaa ka muuqdaan meel kasta oo dhulka ah, ha ahaato cidhifyada taarikada farsamada ama ciladaha. Waxaan ognahay in dhulkeenu leeyahay 4 lakab oo waaweyn oo gudaha ah: xudunta gudaha, udub dhexaadka, gogosha iyo qolofka. Qaybta sare ee gogosha waxay ka kooban tahay qaab dhismeedyo dhagaxyo leh, halkaas oo ay ku yaalliin qaddar go'an oo qulqulka qulqulka, kaas oo dhiirrigeliya dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic sidaas darteedna wuxuu kiciyaa dhulgariir.
Samaynta dhulgariirradu waxay u sabab tahay ballaadhinta mowjadaha dhul-gariirka ee ka dhaca dhulka gudihiisa. Waxaan u qeexnaa mowjadaha dhul gariirka sidii mowjad laastik ah, oo ku dhacda faafinta isbeddelada ku-meel-gaarka ah ee culeyska fekerka waxayna keentaa dhaqdhaqaaqyo yar yar oo taarikada tectonic ah. In kastoo aan ugu yeerno tan dhaqdhaqaaqa taarikada teknoolajiyada, waa inaan ogaano in dhaqdhaqaaqani uu yahay mid iska cad oo aan la aqbali karin. Waa sannadahan ay taarikada tektikada si tartiib tartiib ah u dhaqaaqday marka loo eego malaayiin sano ka hor. Qaaradda waxay dhaqaaqaysaa oo keliya 2 cm sanadkiiba celcelis ahaan. Tani waa mid aan la aqbali karin aadanaha.
Waa in la ogaadaa inay jiraan noocyo badan oo mowjadaha dhul gariirka ah oo si dabiici ah loo abuuri karo. Tusaale ahaan, bina aadamku wuxuu abuuri karaa mowjado dhul gariir oo dabiici ah iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka soo saarista gaaska sida waxyaabaha qarxa ama jabitaanka haydarka.
Mawjadaha gudaha waa hirar ku faafiya dhulka gudihiisa. Waxaan ognahay in waxa ka kooban gudaha meeraheenu ay aad u dhib badan yihiin. Soo saarida macluumaadkan waxay muujineysaa inay jiraan noocyo kala duwan oo mowjadaha dhul gariirka. Tani waa saameyn la mid ah soo celinta hirarka iftiinka.
Mawjadaha P waxaa lagu qeexaa inay yihiin hirar ka dhaca carrada aadka loo cadaadiyo waana mowjado ku fida jihada faafinta. Astaamaha ugu muhiimsan ee mowjadaha dhul gariirkan ayaa ah inay ka gudbaan wax kasta, iyadoon loo eegin xaaladdiisa. Dhanka kale, waxaan leenahay hirarka S, mowjadda noocan ah waxay leedahay u-guuritaan xagga jihada faafinta. Sidoo kale, xawaarahoodu wuu ka gaabiyaa mawjadaha P, sidaa darteed waxay dhulka ka soo muuqanayaan waqti dambe. Mawjadahaasi kuma faafin karaan dareeraha.
Dhul gariirka iyo muhiimada
Seismology waa cilmiga daraasad ku sameeya dhacdooyinka dhul gariirka. Sidaas ayuu ku baranayaa qaybinta waqtiga-bannaan, habka diiradda iyo siideynta tamarta. Daraasada ku saabsan faafinta mowjadaha dhul gariirka ee ka dhasha dhulgariirku waxay diiwaan geliyaan macluumaad ku saabsan qaab dhismeedkooda gudaha, aagga qaabka, cufnaanta iyo isugeynta joogtada ah ee laastikada. Thanks to mowjadaha dhul gariirka, Waa suurtagal in la helo macluumaad badan oo ku saabsan gudaha Dhulka. Waxaan sidoo kale ognahay inay ka dhasheen dhulgariirro ayna go'aamiyaan farsamooyinka warbaahinta laastikada. Tani waxay ka dhigan tahay in xawaareheedu ku xiran yahay astaamaha laastikada ah ee dhexdhexaadka ah ee ay soo saarto, iyo baahintiisa waxaa lagu baran karaa iyadoo la ilaalinayo waqtiga faafitaanka iyo ballaca mowjadahaas.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa uu yahay dhulgariirku iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Waa maxay dhulgariir